१० महिनाको दु’धे नानी र अ’पाङ्ग श्रीमानलाई छोडेर श्रीमती अर्कैसंग फ’रार, बच्चालाई दु’ध किन्नेसमेत पैसा छैन सारा सम्पति लिएर रा’तारात भा’गिन, द’र्दनाक पि’डा(भिडियो) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/१० महिनाको दु’धे नानी र अ’पाङ्ग श्रीमानलाई छोडेर श्रीमती अर्कैसंग फ’रार, बच्चालाई दु’ध किन्नेसमेत पैसा छैन सारा सम्पति लिएर रा’तारात भा’गिन, द’र्दनाक पि’डा(भिडियो)
काठमाडौ । केही समय अघिबाट अहिले मिडियामा एकदमै छयापछयाप्ती भएका बिषय छन श्रीमानले श्रीमती छोडेका र श्रीमतीले श्रीमान छोडेर अर्कैस“ग फ’रार भएका तैपनि एकलै हैन सारा सम्पतीसम्म लिएर फ’रार भएका छन कोईकोई त । यस्ता घ’टनामा अचम्म तब लाग्छ जब जुनी जुनी साथ दिन्छु भनेर राजी खुशी भएर बसेकाहरुनै श्रीमान श्रीमतीलाई धो’का दिएर अर्कै लिएर फ”रार हुन्छन ।
यो कलियुगमा यस्तै घ’टनाले यो तामाङ परिबारलाई पनि छोडेन । सानो परिबार सुखी परिबार भएर बसको यो परिबारमा अचानक ब’ज्रपात परयो ।
उमेश तामाङ नामका यि युवाको श्रीमती अहिले फ’रार छिन, बिहे गरेको २ बर्ष पछि १० महिने नानी छाडेर सारा सम्पती लिएर कहा गईन भन्ने अतोपतो छैन । सम्पतीको नाममा भएको अ’पांग भता र गिलाश भाडाकुडा जस्ता सबै सामान लिएर अहिले कुलेलाम ठोकेकी छिन ।
बिहे गर्ने बेला अ’पांग श्रीमान छ भन्दाभन्दै थाहा पाउदा पनि बिहे गरेकी यिनी अहिले कहा गईन कोस“ग किन गईन ? भन्ने कुरा थाहा नपाउदा श्रीमान भ’क्कानिन्छन भने नानीले मम्मी बुबु भन्दा झन आ’शु झर्छ आखाबाट, हेर्नुस —
श्रीमतीको दोस्रो पुण्यतिथिमा ढोका अगाडि फोटो राखेर भावुक बने मदनकृष्ण !
‘सन् २०२२ सम्म सामाजिक दुरी कायम राख्नुपर्छ’
पहिलोपटक कालापानी सीमाको १ नम्बर पिलरमा सशस्त्रको गस्ती !!
जसले भारतीय च्यानलहरु प्रसारण बन्द गरेर नेपालीहरुलाई खुशी दिए ! [ सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ ]